Android အတွက်အကောင်းဆုံးကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂိမ်း ၉ ခု Androidsis
Android အတွက်အကောင်းဆုံးကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂိမ်း ၉ ခု
အာရုန်သည် Rivas | 11/04/2021 16:00 | Android application များ, Android ဂိမ်းများ
လူငယ်များသည်ရံဖန်ရံခါသူတို့၏မိဘများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုစူးစမ်းလိုကြသည်ကိုငါတို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောအရာများအနက်တစ်ခုမှာထိုအရာဖြစ်သည် ကလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါသို့သော်သူတို့သည်လက်တွေ့ဘဝတွင်သိသာသည့်အကြောင်းပြချက်များဖြင့်မတတ်နိုင်သောကြောင့်၊ ပညာရေးထက်တစ်ခုခုအားဖြင့်ကစားခြင်းသည်ဖျော်ဖြေမှုနှင့်ပျော်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုအကြောင်းပြချက်အတွက်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည့်ဤစုစည်းမှု post ကိုသင့်ထံပို့ဆောင်ပေးမည် အခုအချိန်မှာ Android Play Store မှာရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂိမ်း ၉ မျိုး။ ၎င်းတို့သည်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ကလေးအမျိုးအစားများဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်အသက်အရွယ်မရွေးကစားနိုင်သည့်အတွက်ပျင်းခြင်းကိုသတ်ရန်ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်စေဖြစ်စေမှတ်သားထိုက်သည်။
နောက်သင်တွေ့လိမ့်မည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂိမ်း ၉ ခု။ အားလုံးမှာနာမည်ကောင်း၊ ဒေါင်းလုပ်အမြောက်အများနှင့်ကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
2 1st Day ကလေးထိန်း Mania - ကလေးစောင့်ရှောက်မှုစိတ်ရူး
4 အကြှနျုပျ၏ကလေးအစားအစာ - ချက်ပြုတ်ဂိမ်း
6 ကလေးစောင့်ရှောက်မှု: ကလေးဂိမ်းများ
7 ငါ့ကလေးအသစ်2- အမွှာ!
8 ကလေး Bella ဂရုစိုက်
ဤစာရင်းကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခုဖြင့်သင်၏ကလေးသည်ကောင်းသောသို့မဟုတ်ကလေးထိန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်နည်းဗျူဟာအချို့ကိုသင်ယူနိုင်သည့်ကစားနည်းတစ်ခုနှင့်စတင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကလေးထိန်းအတွက်ကလေးထိန်းကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါလာတာဖြစ်ပြီးဒီခေါင်းစဉ်ကနေတစ်ဆင့်သင်ဟာအခြေခံအယူအဆတွေကိုရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုကုသရမယ်၊ လိုအပ်တဲ့ဂရုစိုက်မှုဘယ်လိုပေးရမလဲ။
ကလေးငယ်ကိုရေချိုး၊ အစာကျွေးပါ၊ သွားများကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ ရေကိုထိန်းပါ၊ အနှီးလဲပါ၊ ညစ်ပတ်လာသောအခါသူ၏ပါးစပ်ကိုသန့်ရှင်းပါ၊ သူမငိုဘဲပျော်ရွှင်နေသည့်အပြင်ကောင်းစွာဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက် flirty dresses နှင့်အကောင်းဆုံးကြည့်ပါ၊ သူနှင့်ကစားပါ။ ဒီဂိမ်းနဲ့အတူမင်းဟာအမေကောင်းတစ်ယောက်၊
ရေးသားသူ: BATOKI - ကလေးများနှင့်ကလေးများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများ
1st Day ကလေးထိန်း Mania - ကလေးစောင့်ရှောက်မှုစိတ်ရူး
ကလေးထိန်းဖြစ်ရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ ဤဂိမ်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရမည်။ ကလေးထိန်း Mania 1st Day သည်ကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကပြည့်စုံသောကလေးထိန်းတစ်ယောက်လိုခံစားရလိမ့်မည်။
မွေးကင်းစကလေးများသည်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်စောင့်ရှောက်ရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်ခန့်မှန်းရခက်ပြီးအလွန်ဇီဇာဖြစ်ခြင်းအတွက်။ ကလေးငယ်များသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ရန်၊ ကောင်းစွာကျွေးရန်၊ ရေကိုသန့်စင်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းစေရန်လိုအပ်သောအာရုံစိုက်မှုအားလုံးကိုပေးနေစဉ်သင်၏စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားပါ။
သင်သည်အမွှာကလေးငယ်နှစ်ယောက်မတိုင်မီသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်သဘောထားများရှိသည့်ကလေးများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်၊ သို့သော်စိတ်မပူပါနှင့်။ သင်ဟာအကောင်းဆုံးကလေးထိန်းဖြစ်ပြီးနေ့ရဲ့အဆုံးမှာဒီဂိမ်းကိုသက်သေပြနိုင်သည်။
ကလေးများနှင့်ကစားပါ၊ ပျော်စရာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလက်မှုပညာများပြုလုပ်ရန်သင်ပေးပါ။ ကွတ်ကီးများ၊ ကိတ်မုန့်များ၊ အရသာရှိပြီးကျန်းမာသည့်နေ့လည်စာများနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ချက်ပြုတ်နည်းများဖြင့်အချက်အပြုတ်အနုပညာများနှင့်လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါ။ သူတို့အတွက်ပါတီပွဲတွေကျင်းပပြီးသူတို့ကိုတကယ့်ဟာသဝတ်စုံတွေဝတ်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်သွားပြီးသဲရဲတိုက်များလုပ်ရန်၊ ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးပြီးသူတို့ရေချိုးသောရေချိုးခန်းရေချိုးရန်ကမ်းခြေသို့ခေါ်သွားပါ။
ဤဂိမ်းတွင်ကလေးထိန်းသို့မဟုတ်ကလေးထိန်းဖြစ်ရုံသာမကသင်ပိုင်ဆိုင်သည့်ပျိုးခင်း၏ပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်မန်နေဂျာ၏အခန်းကဏ္fulfillကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်။ ထိုတွင်သင်သည်သင်၏ကလေးများနှင့်၎င်းတို့အပေါ်အလွန်ကြီးသောတာ ၀ န်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းမကြောက်ပါနှင့်။ မင်းမှာအချိန်ကောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ ထိုတွင်သင်တွေ့ရမည့်ကလေးများနှင့်ကလေးများအားလုံးသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နာခံမှုရှိသည်။
သင်ကလေးများကိုဂရုစိုက်ရမည့်မြင်ကွင်း ၇ ခုရှိသည်။ အနှီးပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖက်ရှင် ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်း၊ တောက်ပနေသောသွားတိုက်တံ၊ အရသာရှိသောအစားအစာ၊ အိပ်စက်အနားယူခြင်း၊ ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းများနှင့်ပျော်စရာရေချိုးခြင်းများရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုစီတွင်သင်သည်သူတို့နှင့်အပြည့်အဝတက်ရောက်နိုင်ရန်သူတို့ပျော်စရာ၊ စားရန်၊ အိပ်ရန်နှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်သူတို့ကိုတက်ရောက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ မိဘများအနေနှင့်သူတို့၏အလုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေသည်။
ကလေးငယ် ၅ ဦး အထိရှိပြီးတစ် ဦး စီတွင်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၊ သူတို့အားလုံးကိုသင်တက်ရောက်ရမယ်၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဗီရိုရှိသဖြင့်သူတို့ကိုအနုစိတ်အဝတ်အစားဖြင့်ဝတ်ဆင်ပါ။ ဒီမှာတီထွင်ဖန်တီးမှုချို့တဲ့လို့မရပါဘူး။ သင်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကစားနိုင်သည့်မီနီဂမ်များစွာရှိပြီးကလေးထိန်းသူသို့မဟုတ်ပျိုးခင်းသူနာပြုတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားနေစဉ်အချိန်ကုန်လွန်သွားသည်ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည့်မျိုးစုံကစားနည်းများလည်းရှိသည်။
ရေးသားသူ: Bubadu အားဖြင့် FM ရေ
အကြှနျုပျ၏ကလေးအစားအစာ - ချက်ပြုတ်ဂိမ်း
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမယ့်ဒီဂိမ်းကဖော်ပြပြီးသားသူတွေနဲ့တူတယ် ၎င်းသည်သင်တာဝန်ယူရသောကလေးကိုဂရုစိုက်ရမည့်အပြင်တစ်ခုတည်းသောအစာကျွေးရန်လည်းဖြစ်သည် ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုချက်ပြုတ်ပါ။
သင်သည်အရသာရှိသောအစားအစာများနှင့်အချိုရည်များကို My Baby Food - Cooking Game ဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းချိုများဖြင့်ကျန်းမာသောအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ပါ။ လိမ္မော်၊ ချယ်ရီ၊ မက်မွန်၊
သင်ကလေးငယ်များကိုဂရုစိုက်နိုင်သည့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်အခန်းတစ်ခန်းအပြင်သင်နှင့်အနည်းဆုံးသင်ငြီးငွေ့နိုင်ရန်သင်ကစားနိုင်သောအသေးစားကစားနည်းများလည်းရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မလုံလောက်သေးသကဲ့သို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်လုံးဝလတ်ဆတ်ပြီးဓာတုပစ္စည်းများကင်းစင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်တို့၏ရိတ်သိမ်းမှုကိုမပျက်စီးစေရန်ပိုးကောင်များကိုတိုက်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သစ်ပင်များရဲ့သစ်သီးများကိုခေါက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။
ဤကျော်ကြားသော Android ဂိမ်းဖြင့်ပြည့်စုံသောကလေးထိန်းဖြစ်လာပါ။ သင်သည်သင်၏ကလေးကိုဂရုစိုက်ပြီးသူလိုအပ်သမျှကိုဂရုစိုက်ပေးသည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သူသည်လှပပြီးလတ်ဆတ်သောအသွင်အပြင်ဖြင့်သူ့ကိုဝတ်ဆင်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများ၊ ဆင်မြန်းမှုများ၊ အဝတ်အစားများ၊ ဆံပင်ပုံစံများ၊ သူ့ကိုတစ် flirty ကြည့်ပေးပါ။
သင့်ကလေးနှင့်ကစားပါ၊ပြီးတော့သူအနားယူပြီးစွမ်းအင်ပြန်ရအောင်အိပ်ပျော်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ သူသည်ငိုယို။ မသက်မသာဖြစ်ရန်သင်သည်သူ၏မိခင်ဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်ပါ။ သူ့ကိုအလွန်ချစ်ခင်စွာဂရုစိုက်ပါ။ သူ့မှာကစားစရာအမြောက်အမြားရှိနေပြီးသူ့ကိုအာရုံမပျံ့လွင့်စေဖို့နဲ့မနက်ဖြန်မရှိလောက်အောင်ပျော်ရွှင်စရာတွေရရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏သန့်ရှင်းရေးကိုအခြေခံသင့်သည့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်ရေချိုးကန်များနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များ၊ သစ်သီးများ၊ ပုလင်းများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြင့်သင့်ကလေးအားအချိန်တိုင်းကျွေးမွေးသင့်သည်။
၎င်းသည်ကလေးငယ်များအတွက်ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးရန်သန့်ရှင်းစေရန်သင့်ကလေးကိုဂရုစိုက်ရမည့်နောက်ထပ်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုရန်လိုအပ်သမျှမဟုတ်ပါ, သငျသညျလညျးဆော့ကစားရမညျ့ကလေးကစားစရာမြားစှာရှိသညျ၊
ကလေးကိုရေချိုးရန်သူ့ကိုခေါ်သွားပြီးကလေးကသင့်အားတိုက်တွန်းပါ။ အားလုံးမလွယ်ကူပါ။ ကလေးငယ်များမည်မျှရှိသည်ကိုသင်သိသော်လည်း၎င်းသည်သင့်အတွက်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုမဟုတ်ပါ။ သငျသညျအမြိုးသမီးအလုံခြုံသည်နှင့်ကောင်းစွာဂရုစိုက်ဖို့လိုအပျကွောငျးအကြီးအမေသို့မဟုတ်အဖေဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုလိုအပ်သည့်အာရုံစိုက်မှုအားလုံးကို ပေး၍ Android အတွက်ဤလူကြိုက်များသောကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂိမ်းနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားပါ။
ငါ့ကလေးအသစ်2- အမွှာ!
Claire, Penny နှင့် Allison တို့သည်မွေးကင်းစကလေးငယ်များကိုကြိုဆိုရန်ပြင်ဆင်နေသောမိခင်သုံး ဦး ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရန်ကလေးငယ်အမြွှာနှစ် ဦး ရှိလိမ့်မည်သင်သူတို့နှင့်ကစားနေစဉ်၎င်းတို့အားကျွေးမွေးပြီးလိုအပ်သည့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုပေးသည်၊ သို့မှသာသူတို့သည်အခါအားလျော်စွာအိပ်မောကျနေပြီးကျန်းမာနေမည်။
ကလေးငယ်များကိုလည်းသင်ဝတ်ဆင်ရမည်၊ ထို့အတွက်အဝတ်အစားများ၊ ဆင်မြန်းမှုများ၊ ဝတ်စုံများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုတီထွင်နိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ အရာအားလုံးသည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရှိသည်။ Android ဂိမ်းစတိုးတွင်ရနိုင်သောဤလူကြိုက်များသည့်ဂိမ်းကိုကစားစဉ်ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်သူတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ပါ။
သို့သော်သင်ကကလေးများသာမကမိခင်များကိုပါသတိထားသင့်သည်။ သူတို့၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုသောက်ပါ၊ သူတို့၏ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်ဆေးများကို ပေး၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကူညီပါ။
ရေးသားသူ: PlayTales စာအုပ်များ
ကလေး Bella ဂရုစိုက်
Baby Bella Caring သည်ကောင်းမွန်သောကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ယခုစမ်းကြည့်သင့်သည်။ ၎င်းသည် Android Play Store တွင် download ပေါင်းသန်းတစ်ရာကျော်ရှိပြီးအများအားဖြင့်အကောင်းမြင်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။
ဒီဂိမ်းနဲ့သင်ဟာကလေးထိန်းတစ်ယောက်လိုခံစားမိနိုင်တယ်၊ သင့်ကလေးကိုယူပြီးသူထိုက်တန်သလိုဂရုစိုက်ပါ။ သူမငိုဘဲအစာမစားနိုင်အောင်ရေတိုက်ကျွေးပါ၊ သူသည်ညစ်ပတ်။ အနံ့မခံနိုင်အောင်ရေချိုးပါ၊ သူနှင့်အတူကစားပါ၊ ကလေးများအားကုသရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြေခံစောင့်ရှောက်မှုကိုသင်ကြားနေစဉ် တာဝန်။
နောက်ဆုံးသင်တင်ပြပြီးသောဂိမ်းများနှင့်မတူသောဂိမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါက Doctor Kids (Children's Doctor) သည်သင်အတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာမင်းဟာကလေးတွေရဲ့ကလေးအခန်းကဏ္ role ဒါမှမဟုတ်ကလေးထိန်းတာကိုတခြားသူတွေမှာလုပ်ရမယ်၊
ဤတွင်သင်ဆရာ ၀ န်၏အခန်းကဏ္fulfillကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသင်၏ဆေးရုံသို့လာသည့်ကလေးအရွယ်လူနာအားလုံးကိုကုသပေးရပါမည်။ သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပါ၊ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ၊ ဒီဂိမ်းနှင့်အတူနေ့ကိုကယ်တင်နှင့်သင်ဖြစ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးဆရာဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android application များ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂိမ်း ၉ ခု
Photocall TV: TV ကို Android မှာအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပုံ